Ihe kpatara iji ghara iji Microsoft Windows | Site na Linux
Enwere ọtụtụ edemede na atụnyere n’etiti sistemụ arụmọrụ dị iche iche, dịka Windows, macOS, GNU / Linux, wdg. E nwekwara ọtụtụ ndị ọzọ nwere ihe kpatara iji jiri sistemụ arụmọrụ doro anya, mana n'isiokwu a anyị ga-ewebata ọtụtụ ihe n’ihi gịnị anyị ekwesịghị iji sistemụ arụmọrụ: Microsoft Windows. Emepụtara ihe ndị a dị ka ntụle maka usoro ọrụ UNIX ndị ọzọ na sistemụ mepere emepe, dịka Linux, FreeBSD, wdg.
Ọ bụ eziokwu na Microsoft Windows nwere ọtụtụ ngwanrọ na akụkụ ya, na enwere ọtụtụ ndị ọkwọ ụgbọ ala na nkwado dị ukwuu site na ndị nrụpụta, maka ndị egwuregwu ọ bụ ikpo okwu nwere aha kachasị, mana nke ahụ bụ n'ihi oke ahịa ọ rụpụtara . Nke kachasị mkpa, ọtụtụ ndị na-ewu akụrụngwa na-etinye ya na ngwaahịa ha, nke mere na ọ ruru ọtụtụ ọrụ fọrọ nke nta site na ọrụ. Ọtụtụ ụlọ akwụkwọ ma ọ bụ ebe agụmakwụkwọ na-ejikwa ya, yabụ mgbe mmadụ mara ya ahụ, ọ na-esiri ya ike imeghari ya na gburugburu ebe obibi. N'agbanyeghị uru ndị a, obere ihe ọzọ sistemụ arụmọrụ na-enye aka ma enwere ọtụtụ ihe ndị ọzọ iji jiri usoro ndị ọzọ arụ ọrụ. N'ezie, na mpaghara ndị ọzọ ebe njikọ Wintel emeghị mmebi ahụ, Windows adịkarịghị, dị ka sava, ndị na-agbazi kọmputa, agbakwunyere, wdg.
na ihe kpatara na ekwesighi iji Windows bụ:
Ahịa: ikike nwere ọnụahịa, ọ bụghị ihe dị ọnụ ala ma ọlị. Na mgbakwunye, ngwanrọ nke dị maka ikpo okwu a na-akwụkwa n'ọtụtụ ọnọdụ, yabụ na-akwụ ụgwọ ahụ nke ukwuu (belụsọ na ezuru ya, mana nke ahụ bụ iwu na-akwadoghị ...).
Nwe: ọ bụ ebe obibi, na ngwanrọ mechiri emechi. Mana na mgbakwunye, a na-emechi ngwanrọ nke dị maka ikpo okwu a. Gaghị enwe ike gbanwee ya, ị gaghị enwe ike kesaa ya na ihe ka njọ, ị gaghị ama ihe ọ na-eme kpọmkwem.
Obere nchekwa: UNIX gburugburu bụ nke ukwuu nke ukwuu nchebe karịa Windows ọbụna ndabara ntọala. Ma ọ bụrụ na anyị ejiri obere oge hazie ma tinye n'ọrụ nchebe, ha ga-echekwa nke ọma. Ọzọkwa, ebe ọ bụ na ha anaghị ewu ewu, enwere obere malware maka ha. Ma n'ihi ụzọ ya si achịkwa ikikere na ikike, malware dị adị anaghị enwekarị nsogbu na mgbe ọrịa butere ọ bụ karịa n'ihi ntụkwasị obi onye ọrụ, karịa n'ihi oghere nchekwa ma ọ bụ adịghị ike.
Enweghị ihe nzuzo- Idebe nzuzo data ma ọ bụ nzuzo na Windows abụghị ozi agaghị ekwe omume. N'aka nke ọzọ, na Linux distros dị iche iche, nchịkọta na mkpesa nke ozi onye ọrụ anaghị eme ya n'ụzọ emere ya na Windows. Ma ọ bụ sọftụwia na sistemụ mejupụtara ya anaghị emerụ ahụ.
Arụ ọrụ na-adịghị mma- N’ozuzu, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ sistemụ arụmọrụ niile na-arụ ọrụ karịa Windows, ma ya Linux, FreeBSD, wdg. Ha nwere ike iri obere akụrụngwa ma rara ha nye ihe ịchọrọ, iji mee ka ngwanrọ ahụ dịkwuo ngwa. Na mgbakwunye, enwere gburugburu desktọọpụ dị fechaa, nke na-acha ọkụ nke nwere ike ọbụlagodi na kọmputa ochie ma ọ bụ nke dị ala. Site n'ụzọ, gbakwunye na, ọ bụ ezie na amaara m na arụla ọtụtụ ọrụ na NTFS, ọ ka na-aga n'ihu na-emepụta mpekere na faịlụ ndị ahụ, nke na-eme ka igwe ahụ jiri nwayọ nwayọ ma jiri nwayọ jiri ya ... A naghị ewu ya ka ọ dịrị!
Enweghị mgbanwe: Windows nwere naanị otu desktọọpụ desktọọpụ, njikwa ngwugwu, bootloader, shei (CMD ma ọ bụ PowerShell na ụfọdụ nsụgharị), otu njikwa faili, wdg. Ọ bụrụ na ọ masịrị gị nke ọma ma ọ bụrụ na ọ masịghị gị, ịnwere ike ịnagide ya… Nke ahụ bụ amamihe. N'aka nke ọzọ, na sistemụ arụmọrụ ndị ọzọ enwere ike ịhọrọ n'etiti gburugburu dị iche iche, shells dị iche iche, ngwa ngwa buut dị iche iche, ndị njikwa faili dị iche iche, ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke sistemụ faịlụ (FS), wdg. Na ọbụlagodi ịme na enweghị ihe ndị a, dịka ịrụ ọrụ na ederede ederede, ọ bụrụ na ịchọghị eserese eserese. Ọbụghị naanị nke ahụ, ogo ogo nhazi ya na-eme ka ọ nwekwuo mgbanwe, yana ebe enwere ike gbanwee ya, ọ na-agbanwe agbanwe ma na-ebugharị ya.
Ogbenye siri ike / ike: Windows anaghị akwụsi ike dịka atụ anya ya, ikekwe maka ọtụtụ ndị ọrụ ụlọ, mana ọ bụghị maka ọrụ ndị ọzọ. Ọzọkwa, ọ bụghị usoro siri ike dịka okwute, kama ọ bụ ihe na-emetụ n'ahụ, ọkachasị aha ya. Ọ bụrụ na nke ahụ, anyị na-agbakwunye njehie na reboots n'ihi mmelite, ọ nwere ike bụrụ ihe mkpasu iwe. Site n'ụzọ, mmelite nke yiri ka ọ na-akpata nsogbu n'oge na-adịbeghị anya karịa ka ha na-edozi. O yiri ka ụfọdụ mebiri WiFi, ndị ọzọ ehichapụ faịlụ ndị ọrụ, ụfọdụ ahapụla ụfọdụ kọmputa enweghị ike buut ma ọ bụ mepụta nsogbu arụmọrụ, na nke ikpeazụ na May dị ka Microsoft kagbuola n'ihi na ọ kpatara ngwaọrụ USB na onye na-agụ ya Kaadị SD kwụsịrị ịrụ ọrụ ...
You nwere ihe ọzọ? Enwere. Echefula ịza ajụjụ ...
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » GNU / Linux » Ihe kpatara iji ghara iji Microsoft Windows
Enwere m ike ịnye gị ezigbo ndepụta na-aza isi okwu ọ bụla, mana ọ dị mfe iji chịkọta ya na na Windows isi kpo oku na-abụkarị obere ihe maka ọtụtụ ihe. Enweela m ụbọchị nke m emelitere ndị ọkwọ ụgbọ ala NVIDIA na pịa 2 na igwu egwu, enweela m ụbọchị nke m ga-efunahụ ehihie abụọ n'ihi na ndị ọkwọ ụgbọala ahụ nyere m nsogbu na Arch nke m nwere na laptọọpụ. M na-eji sistemụ abụọ kwa ụbọchị na nke ọ bụla maka otu ebumnuche, agaghị m agha ụgha nye gị ma m gwa gị na m na-arụ ọrụ nke ọma na Linux.
M na-ahụkarị oke asị megide Microsoft mgbe ị na-ekwu okwu n'ọnọdụ ndị a. Ọ masịrị m ịhụ ya dịka na ọ bụghị ihe niile dị oji ma ọ bụ na-acha ọcha, echere m na ị nwere ike ibi na ha abụọ n'ụzọ zuru oke, nsogbu bụ ịgbanwe ihe niile n'ime Barcelona - Real Madrid, ma ọ bụ na m ma ọ bụ megide m.
Anọrọ m oge ụfọdụ na Manjaro na-eji ndị ọkwọ ụgbọala anaghị akwụ ụgwọ na enweghị m nsogbu na kaadị Nvidia m.
Naanị m laghachiri Ubuntu n'ihi na enweghị m ike ibi na-enweghị Unity.
Christian Guzman dijo
Dị ka m na-ekwu, Linux na-efu ọtụtụ ihe, ọtụtụ ndị agaghị etinye kaadi vidiyo ha ma ọ bụ ngwaọrụ ndị ọzọ na ịpị aka abụọ dị mfe na Linux, enweghị ụlọ akwụghị ụgwọ na-eme ihe ms office na-eme, isi ihe nwere ike ee, mana ị you ọ dị ka iji ọfịs site na 2-10 afọ gara aga, interface siri ike site na oge Windows 15 na enweghị ọtụtụ ọrụ ọhụụ; Ruo mgbe ha weputara ihe yiri nke a, ihe ndi ozo eji eme enyi, otutu mmadu gha agaghachi na Windows.
Isi okwu ikpeazụ: egwuregwu. Ọtụtụ egwuregwu dị na nyiwe dị iche iche na-adabaghị na Linux, ndị ọkwọ ụgbọala ahụ na-ejikwa njikarịcha arụmọrụ maka egwuregwu ọhụrụ ọ bụla kwa izu. Na-ama ọkwa ahụ, ị ​​ga-enweta log ahụ na mmelite ụfọdụ egwuregwu ụfọdụ, ị pịa otu bọtịnụ ma mezie ihe niile. Na Linux ị fọrọ nke nta ogide ọkwọ ụgbọala si 6 ọnwa gara aga na-enweghị ndị a optimizations. Ma ọ bụ ikwu otú onye njikwa faịlụ dị enyi mgbe ị jikọtara pendrive ma ọ bụ mbanye mpụga ndị ọzọ na faịlụ ndị ahụ na-apụta na akara ngosi nke ha mgbe ha nwere ya ma mepee windo imeghe ha. Ihe ndị a bụ ntakịrị ihe ndị ọrụ Linux wepụrụ. N'okwu m, ana m egwu ọtụtụ ma jiri ọfịs ahụ ọtụtụ. Olee otu ị ga-esi mee ka m si ebe ahụ pụọ?
Zaghachi Christian Guzman
Ọ bụrụ na ọ bụ ihe osise Radeon ọ bụ ihe na-erughị 2 clicks, ha bụ 0, ịkwesighi ịwụnye ihe ọ bụla
MS Office kemgbe 2009 Akpọrọ m ya asị, ọ jọgburu onwe ya ma ghara ịmị taabụ
Ọ bụghị mmadụ niile bi na egwuregwu ma 70% hacks ha na Windows
Enweghị optimizing ndị ọkwọ ụgbọala? Will ga-ekwu ya maka Nvidia, na ndị ọkwọ ụgbọala ahụ na-egbu mgbu, AMD na-emelite ha ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ kwa izu ma ha enwere onwe ha
Vulkan dị na ndabara na Linux ebe Microsoft achọghị ya maka igbu DirectX
Rafa marquez dijo
Linux na-arụ ọrụ maka ihe niile, ọghọm bụ libreoffice nke bụ ntakịrị ihe bum.
Windows, egbula ndị ọkwọ ụgbọala n'ihi na igwe agaghị arụ ọrụ maka gị ọzọ. Azụrụ m laptọọpụ na mbụ win7, mgbe m ga-etinye ya ọzọ ... enweghị m win7 (ha anaghị enye gị ya) ma ọ bụ ụda olu, wifi, wdg. M tinyere kubutu na ya ma ọ dị mma.
Zaghachi Rafa Marquez
Osvaldo marquez dijo
Echiche m bụ na ị nwere ike ibi na sistemụ arụmọrụ, eme ya niile maka windo, ihe atụ bụ iji rụọ ọrụ m, ọ na-esiri m ike ịnweta ndị ọrụ ibe m iji Linux, ha nwere ike ịnwe windo, chee, ọkachasị ụlọ m anyị na-eji Linux Linux na sparklinux na q4os, na-enweghị ihe ndọghachi azụ, agbanyeghị echere m na ọ gaghị adịrị mma ịga n'ụzọ ọzọ, Linux ga-abụ azụmahịa dị ka windo na n'ezie ha ga-emepụta nje na ndị ọzọ, na n'elu Linux, iji nye ụlọ ọrụ ahụ nri. antivirus nke buru oke ibu
Zaghachi Osvaldo Marquez
Jide Windows. Ga-ahụ asị ha kpọrọ ya mana ha agaghị emeri.
autodesk- ọ dịghị ihe omume na-abịa nso a. Draftsight ntakịrị.
adobe after effects - bia ... ndị na-eji ngwa ndị a maara nke ọma na ndị ọzọ na linux bụ n'oge ha dị na nwata (ee, nke a, mana mgbe ị na-ebupụ ... ọ na-ewe afọ 1 iji tụnyere adobe)
ele ihe anya - ọ dịghị ihe ọ bụla yiri nke ahụ maka Linux, ọ bụghị 1 n'ụzọ atọ nke ihe eji arụ ọrụ.
hmm ... ihe ozo?
PS: M hụrụ n'anya linux, mana m ma maka nsogbu ya
Kpọrọ ihe ?? Ekwenyere m na gị na nke mbụ na nke abụọ azịza, ọ bụ ezie na ị ga-ekweta na ọ bụ nnọọ pụrụ iche software, ma… echiche?
Have nwere Thunderbird dị ka njikwa ozi, nke na-arụ ọrụ dị ukwuu, ijikwa kọntaktị, otu, aha njirimara, nhazi ngwa (nke dị elu karịa Outlook), ndọtị, kalenda, njikwa ọrụ, ọtụtụ akaụntụ email, mmekọrịta na gmail, njikwa email site na taabụ… . ma enwere m ike ịga n'ihu. Ọbụna ọchụchọ ahụ zuru ezu karịa na Outlook, ọ bụghị na m na-ekwu ya, ndị ọrụ ibe m na-ekwu ya site na iji ngwa ahụ kwa ụbọchị na ihe karịrị kọmputa 20.
AutoDesk n'ozuzu ya fọrọ nke nta ka ọ ghara iji ya tụnyere ndị ọkachamara na ndị ọzọ dị na Linux, maka nkezi na ndị ọzọ, achọrọghị ya.
Adobe mgbe ọ gasịrị, bụ mmemme etinyere ndị ọkachamara mana na Linux ọ nwere ọtụtụ ndị na-agba ọchịchịrị nke kpuchiri ya, gụnyere ngwakọta, nke dị na Linux karịa Windows.
Microsoft Outlook, ebe a ị nwere ike ibudata ọghọm nke usoro ihe omume ahụ, njikwa nchekwa nchekwa na-adịghị mma, ngwa ngwa, dị arọ ma ọ bụghị kwesịrị ekwesị maka ụlọ ahụ (mgbagwoju anya ma ọ bụrụ na anyị na-ekwu maka ụdị ndị ọkachamara), onye na-emegide gị bụ Thunderbird, Evolution na Kmail (maka ndị ọkachamara ahụ) ) ma ọ bụrụ na ị na-ekwu maka Outlook dị mfe, ọ nwekwara ndị iro siri ike ma dị mfe na Linux, ọbụlagodi na Windows enwere mmemme ndị ka mma.
Ka ọ dị ugbu a, Linux bụ sistemụ arụmọrụ kachasị mma maka ndị mmemme, ndị na-ese ihe nkiri (ka anyị lee fim ikpeazụ na nsonaazụ pụrụ iche iji ghọta na ewebata Linux), ụlọ ọrụ na ngalaba nhazi (nkwụsi ike ya na ogologo ndụ ya) na ụlọ (ọ nwere nke kachasị ọhụrụ ma ọ dịkarịa ala mgbagwoju anya na ahịa)
N'ezie Linux abụghị azịza maka ihe niile dị ka MacOS mana ọ na-arụ ọrụ na ọfụma. Ihe niile dabere na onye ahụ n'ihu kọmputa ahụ.
Anaghi m emegide Linux. mana ntụnyere gị bụ ihe arụ .. Aga m enye gị ihe atụ a: ọ bụrụ na ị ga-azụ ụgbọ ala, ebee ka ị na-aga? tinye ya chevrolet ford. Pay na-akwụ ụgwọ ụgbọ ala ahụ ma ịmara na ọ bụrụ na ị nwere nsogbu na ya otu ụbọchị n'ihi iji ya eme ihe n'ụzọ na-ezighị ezi, ị nwere nkwado na ndị nọ ebe ahụ iji rụkwaa ụgbọ ala ahụ ... ma ọ bụ na ị na-ahọrọ ịzụta ụgbọ ala efu ị na-enye Amaghị onye mere ya, ọ bụrụ na ịhapụ ịhapụ ị ga-arịọ arịrịọ ka ị chọta onye ọrụ igwe ma ọ bụ ọkụ eletrik nke mere nrụnye ahụ iji dozie ya maka gị n'ihi na nwoke ahụ mere ihe ndị ahụ n'ihi na ọ nwere oge n'efu ma nwee ndụ, ọ adịghị maka nsogbu gị. Mgbe ahụ, chọọ ụgbọala agbata obi ọzọ iji zute ma ọ dịkarịa ala ihe ị chọrọ. ma iju na ndị ọzọ ụgbọ ala na-mere na a nnọọ ụzọ dị iche iche ma na facades nke uzo ma ọ bụ chevrolet. ma ọ bụghị ọbụna ọkara nke ihe ezigbo onye na-agba mmiri ma ọ bụ chevrolet na-amị ..
Linux bụ na ọ ga-abụ onye nzuzu banyere sayensị kọmputa .. onye ọ bụla na-etinye aka ya na ya .. kpọọ aha mbipụta ole m na-ahapụ windo .. ma kpọọ ole distro Linux nwere .. na nke abụọ
Otu n'ime ihe nzuzo dị mkpa na-efu Windows 10 bụ sistemụ arụmọrụ na-anakọta ọtụtụ data site na ndị ọrụ ya
Ihe kpatara na anaghị eji windo UnU nke jọgburu onwe ya ma ọ bụrụ na Linux agbagha ebe m na-enweghị ike iji Photoshop, premiere, indesing, illustrator, play and stream 100%, Linux dị mma, o nyeere m aka nke ukwuu maka ọdụ data na ụfọdụ koodu ndị ọzọ mana site n'ebe ahụ inwe ya dị ka isi, enweghị ekele, enweghị m ike ime ihe ọ bụla.
Anọ m na-eji gnu / linux eme ihe (karịa nke ezinụlọ Ubuntu) kemgbe 2012. Mgbe m na-ekwu onye ọrụ oge niile, m na-ekwu onye na-anaghị eji ụdị usoro a na PC PC. Abụghị m "onye na-enyocha distro," enweghịkwa m nnukwu ihe ọmụma Linux karịa ihe onye ọrụ nkịtị chọrọ.
Abụ m onye na - enweghị atụ nke sọftụwia na - akwụghị ụgwọ na nkà ihe ọmụma ya dabara n’ụzọ m si eche echiche. Abụ m onye mmebe ihe osise, onye na-ese foto na onye na-ese ihe. Kwa ụbọchị m na-eji mmemme dịka Gimp, Krita, Rawtherapee, Inkscape na ogologo wdg. Azụtara m akụrụngwa kọmputa m na ihe mbụ m na-eme bụ ịhazi ya ma wụnye nkesa Lubuntu, ọbụlagodi na ọ dị na i5, n'ihi na m hụrụ ka ịdị mfe nke LXDE eserese mara mma, na-enweghị mmetụta ma ọ bụ ihe ịchọ mma yana karịa ihe niile iji bulie. ịrụ ọrụ dị ka o kwere mee. Na nkenke, anaghị m eji PC m arụ ọrụ m (naanị m na-egwu igwefoto XD).
Nsogbu m nwere bụ na abụghị m ọkà mmụta sayensị kọmputa, ma ọ bụ onye mmepụta ... ihe m bụ nkà, na mgbe m nwere nsogbu amaghị m ebe m ga-aga.
Anọ m na-achọ gnu / Linux forum maka ogologo oge. Amaghi ebe…
M na-echekwa ma ndị ọrụ Linux mgbe niile na-eji otu distro ma ọ bụ na-agbanwe mgbe niile (ike gwụrụ m nke na-emelite OS mgbe ọ bụla maka ihe ọ bụla).
Kọmputa m bụ HP Intel Core i5 (3.40 Ghz) na 8 Gb nke RAM.
OS Lubuntu 18.04.2 Lts nwere kernel 4.15
Ihe eserese Nvidia Quadro K600 / PCIe / SSE2
Ana m eji draịva siri ike 500 Gb, otu n’ime ha naanị iji chekwaa ọrụ m.
Nsogbu m nwere bụ na ọ na-ekowe m mgbe niile. Gimp mkpọka, mgbe ụfọdụ Leafpad mkpọka, ọbụna PCMANFM ... M na-eji ha kpomkwem n'ihi na ha bụ Mkpa ọkụ ma e nwere ụbọchị mgbe m na-enweghị ike ịrụ ọrụ ọ bụ nnọọ na-akụda mmụọ ...
na tupu na nsụgharị Lubuntu 14.04, 16.04 ọ naghị adakwasị m. Aghọtaghị m ihe ọ bụ. Kọmputa, sistemụ, mụ onwe m… Amaghị m… Ahụmịhe m na Lubuntu 18.04 dị njọ nke na enweghị m olileanya.
Emechara m zụta Wacom Mobilestudio Pro (ọ bụ ezigbo i7) na Windows 10, ejiri m 3000 euro na ya na nrọ m bụ iji ya mee ihe atụ na Krita na sistemụ Linux mana amaghị m ihe m ga-eche banyere .. Windows anaghị akpali m ma ọlị ma ọ na-arụ ọrụ na ọ bụ opekempe m na-arịọ maka sistemụ arụmọrụ.
Ihe m na-atụ anya ya na uru m gụrụ banyere Linux ga-ala n'iyi mgbe m meghere Gimp na PC desktọọpụ m na ọ kwụgidere ọzọ.
Anaghị m ahapụ usoro gnu / Linux, mana achọrọ m enyemaka.
Ikekwe ị na-ajụ onwe gị ajụjụ ahụ n'ụzọ na-ezighi ezi. Ka mma juo nke nkesa kacha mma maka ihe ị chọrọ. Ezubere Lubuntu maka ihe ị jiri ya. M ga-ahọrọ Ubuntu Studio, ArtistX ma ọ bụ Debian nwere desktọọpụ dị fechaa dị ka Xfce ma ọ bụ Mate. Zere "ịgbagha" dịka Arch ebe ọ bụ na ọ na-agbanwe mgbe niile, oge na-abịa mgbe ngwugwu na-efunahụ ndakọrịta. Ka anyị kwuo na site na "ịgbagha" ndị nyocha kachasị mma bụ gị. Mana nke kachasị, chee na sistemụ arụmọrụ dị ebe ahụ iji jeere gị ozi ọ bụghị n'ụzọ ọzọ. Ọ bụrụ na ị na-eme atụmatụ na windo na-ezute ihe ị na-atụ anya ya ma ị nwere ike ichefu banyere arụmọrụ ya ma lekwasị anya na ọrụ gị ... jiri windo. Ọ bụrụ n’inwere nsogbu “ọgụgụ isi” ma chee na GNU / Linux kwesiri ohere na na ọ bụ sistemụ, jiri obere ihe ọmụma, dị ike karịa, gbanwee ma nwee ike ịhazi karịa Windows, gaa n'ihu ma gbalịa. Echefula na ewepu sistemụ ahụ, ngwaike dịkwa mkpa. Maka ihe eserese na nke eserese na ọ dịghị ihe dị mma karịa OSX, mana ọ naghị arụ ọrụ maka gị na kọmputa niile. Jiri ihe ị chọrọ na ihe suut gị mma ebe ọ bụ na OS dị n’ebe ahụ iji mee ka ndụ gị dịkwuo mfe ma ghara ime ka o sie ike. Ndụmọdụ m bụ ka ị hapụ windo 10 na Wacom yana nke ọzọ na-anwale Linux distros. Wụnye, wepu, nwaa nkesa, mụta ... Ma lezie anya, ọ na-eri ahụ.
Gaa na Aneurism
Na ileba anya na nsogbu HP gị bụ n'ihi nvidia ọkwọ ụgbọ ala, ọ ga-abụ na ị ga-agbanwe onye ọkwọ ụgbọ ala, gaa na ndị ọkwọ ụgbọala ọzọ iji nweta ndị ọzọ. Agbanyeghị na ọ bụghị nkọwa dị oke mkpa mana ikekwe adaba maka akụrụngwa gị karịa LXDE, m ga-adụ XFCE ọdụ (ma ọ bụrụ na anyị na-ekwu maka nkesa Xubuntu).
Atụmatụ abụọ a bụ n'ihi na oge ụfọdụ ihe eserese ahụ na-ada ma ọ bụghị kọmputa ahụ, na LXDE ka a na-echekwa ya, ka anyị kwuo na interface ahụ na-anwụ nwayọ nwayọ.
Ana m ekele gị nke mbụ.
Ejiri m Xubuntu ọtụtụ oge tupu oge ahụ, mana XFCE (nke m hụrụ n'anya) nwere ahụhụ na-enweghị atụ na ihe ngosi akara ngosi nke na-ahapụghị m ka m rụọ ọrụ nke ọma, ọ ga-akwụtụ nwa oge. Kedu ihe kpatara m ji kpebie ịgbanwe na LXDE wee gbanwee Thunar na PCMANFM.
Kedu ụzọ m ga-anwale ihe ị na-ekwu, ọ nwere ike bụrụ na esemokwu ahụ bụ n'ihi ihe osise Nvidia (ọ gaghị abụ oge mbụ na-eme).
Peeji nke Nachete dijo
Morningtụtụ ọma nụ.
Echiche nke onwe m: M na-ahụ isiokwu a dị ka iwe ọzọ ma ọ bụ iwe na akụkụ nke ultra sectors nke free software dabere na-aga n'ihu dominance nke Windows on PC. Mana nke bụ eziokwu bụ na (dị ka ọtụtụ azịza ndị edere na post a) Windows na-arụ ọrụ na Linux na-eme ka mmiri dị na ngwaike - larịị ngwanrọ.
Kpachara anya, m bụkwa onye ọrụ Lubuntu 32 na 64 bit maka ego. Maka akụrụngwa na-arụ ọrụ n'ụlọ ọrụ, Linux arụ ọrụ, mana na ọrụ ọkachamara: B NOTGH F ARBARR..
Ewezuga Gimp (oge ụfọdụ) na ndozi 3D (Blender), ndị editọ dị ka Adobe bụ ezigbo anụ mmiri nwere nnukwu nsogbu ndakọrịta ma dị anya inyefe ntụkwasị obi a pụrụ ịdabere na ya »akwụ ụgwọ« software.
M na-eme web peeji nke: na Atom, Gimp na Libreoffice ọ dị oke ọnụ ma na m ga-ekele Lubuntu mgbe niile mana anyị ga-amata adịghị ike nke usoro Linux. Ma nke ahụ kwesiri ịbụ ebumnuche nke isiokwu ahụ, dịka ịkpọ oku: ọ bụrụ na anyị chọrọ sọftụwia na-akwụghị ụgwọ, anyị ga-etinye ego, ma ọ masịrị anyị ma ọ bụ na ọ masịghị (dịka Windows na Mac na-eme).
Ugbu a Isaac, ị chọrọ inye aka melite onyonyo nke Linux? Ikwesiri ide ihe banyere akụrụngwa kacha mma (igwe okwu, mbadamba ...) maka akụrụngwa dịka PC Ofimatica, PC Worstation ma ọ bụ Ọkachamara PC yana sọftụwia kwesịrị ekwesị maka nke ọ bụla n'ime ha. Wayzọ a ị ga - egosipụta na arụmụka siri ike na ọ bụghị site na nyocha nke onwe bara uru uru nke nnwere onwe Linux Linux na Windows.
Daalụ niile maka ịgụ echiche m dị umeala n'obi.
Zaghachi Peeji Nachete
Ọfọn, m na-asọpụrụ nkọwa niile m na-agụ ... Ma ọtụtụ nkatọ m na-ahụ na-ekwu na GNU / Linux ma n'eziokwu, ha bụ nsogbu nke ndị mmepe sọftụwia dịka Autodesk, Adobe, Microsoft, wdg, ma ọ bụ ndị na-emepụta akụrụngwa anaghị enye ndị ọkwọ ụgbọala maka Linux. Ma ọ bụghị nsogbu nke Linux n'onwe ya ... Gini mere ịme ya? N'ihi na enweghị ọtụtụ ndị ọrụ dị ka Windows ma ọ bụghị uru. Ma, ana m ekwughachi, ọ bụghị nsogbu nke Linux n'onwe ya ma ọ bụ nke nkà ihe ọmụma na-emeghe ma ọ bụ na-enweghị n'efu. Ọtụtụ n'ime nkatọ nke edemede ahụ bụ n'ihi enweghị nkwenye nke ndị mmepe ụlọ ọrụ ụfọdụ.
Na-akatọ ihe dị na Linux ma ọ bụrụ na ọ dị, mana ụdị nkatọ a ikekwe ị ga-eme nke ndị na-anaghị emepe maka Linux, ọ bụghị obodo ma ọ bụ m. Gwa ya na Adobe, Autodesk, na ndị ọzọ nnukwu ibu nke ngwanrọ, egwuregwu vidio, wdg.
Kedu Linux anaghị arụ ọrụ? Kedu Windows na-arụ ọrụ? Anọ m na-arụ ọrụ ọkachamara na Linux ruo ọtụtụ afọ na enweghị nsogbu. Ọfịs? Ọ dị mma, ịnwere ike iji Office na ntanetị ma ọ bụ Docs Google ... ma ọ bụ jiri Wine, wdg. O di nwute na mgbe ufodu, m gha emetu komputa Windows aka nke ha wetara m imezi ya bu asusu. Dịka ọmụmaatụ, gịnị kpatara ịbụ onye nchịkwa na ịmanye nhichapụ folda site na njikwa anaghị ekwe gị? !!! Gịnị kpatara ndị ahụ ga - eji melite? !!! Kedu ihe kpatara m jiri nweta ọtụtụ kọmputa nwere nsogbu mgbe emelitere mmelite 10? !!! ... ma ọ bụrụ na ihe niile na-arụ ọrụ nke ọma ...
Tantrum? Ọ bụrụ na m natara ụgwọ ọnwa site na Linux Foundation ma ọ bụ FSF, ma ọ bụ ụgwọ ọnwa m dabere na ire nke Linux ma ọ bụ sọftụwia na-akwụghị ụgwọ ... Eleghị anya ọ nwere ike bụrụ iwe. Ma ọ dịghị nke ọ bụla dị otú ahụ. Na m free iji Windows ma ọ bụ Mac ọzọ mgbe ọ bụla m chọrọ. Gịnị ma ị mee ya? N'ihi na na Linux m na-ahụ onwe m ezigbo ntụsara ahụ, ọbụlagodi na enwere ndị na-echegbu nke a ...
Ka m na-ekwughachi na post m gara aga: ọ bụ echiche m dị umeala n'obi.
Mana Isaac, nke bụ eziokwu bụ na ndị mmadụ chọrọ ka kọmputa ha rụọ ọrụ, oge. Ha achoghi ka eme ha ihe mgbagwoju anya na nsogbu ndi ozo ... ma ana m agwa gi okwu site na ahuhu n'ihi na etinyewo m Ubuntus ole na ole (Mate, ya na Gnome na Lubuntu) ma 32 na 64 bits na laptọọpụ na PC. .. na ụbọchị ise ka e mesịrị, ha rịọrọ m ka m biko wụnye Windows ọzọ n'ihi na ihuenyo ahụ na-agba oji ma ọ bụ nwee ọtụtụ ọnya (NVIDIA na ATI), ọ naghị emezi njikọ VPN na-arụ ọrụ, enweghị ụda ọ bụla, ọ maghị wifi kaadị ma ọ bụ ọ na-mgbe niile na-atụfu njikọ.
N'ezie, ọ baghị uru ime ngwaike dakọtara na Linux n'ihi na ọtụtụ ndị ọrụ adịghị, ya mere ha ga-alaghachi na windo…. na olee ihe jọrọ njọ na windo (ma ọ bụ MAC) ... ọ ga-abụ otu akụkọ mgbe niile ... belụsọ na Linus Torvalds ga-agbanwe kernel imewe dabere na ngwaike, ma ọ bụ ikekwe ọ ga - akparịta ụka na "ndị enyi" ya site na NVIDIA ma ọ bụ ASUS ... ọ bụ ezie na m na-atụ ụjọ na nke ahụ ga-abụ ụgbọ oloko n'ihi na anaghị m ahụ onye ọ bụla na-atụgharị aka ya.
Ma ọ bụghị eziokwu na ịgwa "ndị enyi ahụ" (gụọ ụlọ ọrụ) ihe arụ na akụkụ ụfọdụ nke sọftụwia na - akwụghị ụgwọ maka atumatu sọftụwia ha.
Gịnịkwa ka anyị na-eme?
N'ikwu eziokwu, ọ dị mwute, n'ihi na ọ bụ eziokwu na Linux bụ ezigbo usoro yana ezigbo ihe ọzọ (na abụ m onye ọrụ, kpachara anya), mana nke bụ eziokwu bụ na ọ bụrụ na etinyeghị ya n'ụzọ ziri ezi na ngwaike ọ nweghị uru n'ihi na ọ enweghi ike igbusi ya na nkwa. Ma nke ahụ bụ ihe kpatara oke 3%, nke ka ukwuu n'ime igwe mebere ... na n'ezie, Adobe na-ekwu, sị: »ọ gaghị abụ«.
Ma ọ dịghị mkpa ịga gwa ha okwu ma ọ bụ Autodesk, ma ọ bụ Uchu maara ALREADY ahịa òkè nke kernel Linux (ha abụghị ndị nzuzu).
Ihe ọzọ bụ Servers. N'ebe ahụ, ya na enyi ya Kerberos, ihe gbanwere. Chebe onwe ha.
Banyere mmelite, Linux dara. Ma ahụla m ma taa ahụhụ na igwe 32 na 64. Na Windows kwa (Amaara m W10 nke batara n'ime akaghị maka ngwungwu melite, mana ebe ọ bụ ụdị Home, ọ nweghị GPO iji gbanyụọ ha).
Ọ bụghị mmadụ niile maara ihe Wine bụ na ndị mmadụ achọghị ịma ma ọ bụ enweghị echiche banyere ịba ụba nke mmemme windo na Linux. N'ezie ha na-agwa m: gịnị bụ nke ahụ? ... ma mgbe ị na-akọwara ha ya, ha asị: mba, mba, hapụ ya. Site n'ụzọ, ị ga-enwerịrị site na I3 na 8gb Ram iji jiri Wine mee ihe n'ụzọ dị mfe, ọ bụ ezie na ọ dabere na ngwa ị na-eji.
Yabụ, maka imecha. Linux adịghị ewute m. N'ezie, m na-ede site na Lubuntu 64 bits na firefox. Enwekwara m onwe m n'ihi na enwere m ike ịrụ ọrụ na Windows na Mac.
Ihe kpatara na ịghara iji Windows ga-adị ọtụtụ mana Linux nwere isi nsogbu na ọ bụ ndakọrịta, nke Windows na Mac na-ejikwa nke ọma.
Ọ bụrụhaala na Linus Torvalds achọtaghị ihe ngwọta, ọ ga-abụ usoro pere mpe maka ọha na eze yana obere mkpa maka ndị mmepe na ngwaike na ngwanrọ ... wee bido.
Ngwanu, kele onye obula.
Mgbe ndị na-enweghị ọtụtụ ihe ha ga-emefu ma ghara inye mmasi banyere iwu, ha na-enweta ihe nke abụọ wee chọọ onye ga-etinye Windows na ha. Nke a na-agwa ha na XP, dị ezigbo mma mana ọ bụrụla mgbe ochie, na 8 dị egwu, 8.1 dị njọ karịa yana na 10 enwere naanị nsogbu na enweghị ezigbo ndị na-eme ihe. Mgbe ahụ naanị nhọrọ fọdụrụ na onye ọrụ dara ogbenye bụ ịwụnye Windows 7. Ọkara elekere mgbe nke ahụ gasịrị, ọ wụnyela ụdị Win 7, 2012 ọhụụ nwere mmelite akpaka ka Microsoft ghara ịchọpụta ya ma gbanyụọ ya. Obere windo ahụ ebe ọ na-agwa gị na "oyiri nke Windows abụghị nke mbụ dị oke njọ ...". Ihe na-esote bụ iji chebe onwe gị dịka ị nwere ike site na usoro nke oge ahụ dị afọ 7 mana ọ maghị ya. Naanị ịhụ na ọ gbanye ma rụọ ọrụ na-afọ ojuju. Kedu ihe dị iche na onye ọrụ nke sistemụ arụmọrụ n'efu….
Unu ndị ọrụ Linux ga-anakwere na Linux nwere ike ọ gaghị erute òkè ahịa nke lunux nwere, na ọ bụghị n'ihi na ọ ka mma mana n'ihi na ọ dị mfe iji maka onye ọrụ dịkarịsịrị karịa ọtụtụ ndị mmadụ n'ụwa.
Site na ikikere windo ị nwere onye ị ga-eme mkpesa ma ọ bụrụ na ihe emee ma ị nwere nkwa, yana linux ọ dịghị otú ahụ, yana ọ ga-ewute ịnabata ha agaghị enwe ihe windo nwere na ọkwa onye ọrụ, ha nwere idozi maka ndị ọrụ Linux ole na ole nke ga-achịkwa na akụkụ ndị ọzọ (sava, mobiles ma ọ bụ usoro igodo) windo ga-amasịkarị onye ọrụ ọ bụla
(2) Sọftụwia ahụ nwere ike ịbụ ikpo okwu, dịka ọmụmaatụ, micro-editor ruo qbittorrent, wdg. … Ọ bụrụ na ịchọrọ ọkachamara software, kwụọ ụgwọ maka ya, n'ihi na ọ kwesịrị ịbụ nsogbu… Kpochapụwo Ndewo !wa! O kwesịrị ya, gbanwee ya, kesaa ya ma gụọ ọdịnaya ya its
(3) macOS ka enyere asambodo dị ka UNIX, ọ dị nchedo 100% ... A gam akporo, ha na-ekewa ya dịka Linux, ọ dị nchedo 100%. Ntọala ndabara nke ụfọdụ nkesa gụnyere ijikwa firewall na iptables / nftables ... Enwere m obi abụọ na mgbanwe sitere na Windows gaa na Linux na-eme ka mkpụrụ ndụ hacker anyị niile na-ebu n'ime ... includefọdụ gụnyere GUFW, na ọnọdụ OFF, mana ọ bụ ... Ugbu a, anyị na-ekwu maka nhazi sshd_config, m na-ajụ, nkwukọrịta site na ọdụ ụgbọ mmiri, 22, na nbanye site na paswọọdụ, ọ dị mma? … Gini mere onye jiri n’ulo oru ya gha acho ka oru ya?
Otu onye echewo ihe na-eme na sava linux, ị chere na ha dị mma 100%? A ga-enwe ụfọdụ ihe mere iji tinye ngalaba nchekwa na akwụkwọ Debian ma ọ bụ ArchLinux wiki.
(4) Maka na achọghị m ido onwe gị n'okpuru kọmịlị akụkọ na Debian (reportbug) ... Ọ bụrụ na ị na-eche banyere telemetry na ngwaọrụ (s) gị, chọpụta.
(5) Ọ dị mma, enwere m ike iji Openbox na pentium 4, mana ka m na-etinye akara ndị ọzọ na autostart, ihe nchekwa RAM na-eri ... More ọrụ arụ ọrụ, karịa ebe nchekwa RAM ... Na sọftụwia ahụ ... na GTK + 2 ... Ma na oge ụfọdụ m ga-akwaga na ngwa agbakọtara megide GTK + 3 ... Akụrụngwa ahụ na-agbanwe, onye ọrụ, ọbụlagodi na Linux ... Ọ bụ ezie na ọ dị ntakịrị nwayọ, 🙂
(6) Ọ bụrụ na ọ bụ eziokwu, ọdịiche dị iche na-amata ọdịiche Linux ... Ọ bụ ezie na ọ bụ otu esemokwu.
(7) M na-achikota ya, mgbe Debian 10 pụta, anyị ndị agha ochie na-ahụ ihe na-eme na kọmpụta nke ndị ọrụ nwere obere ọrụ na ahụ erughị ala, na mgbe oge ruru iji melite, anyị na-agụ akwụkwọ ntọhapụ, ka anyị wee ghara ịjụ ajụjụ nzuzu, dị ka, emela m mmetụ touchpad ahụ, ana m ahụ ihuenyo ojii, wdg. ... Onye na eche ihe n’eme na nkesa dika “Rolling release” ... Oburu na Slackware 15 putara, m ga enwe ike nweta nkwalite site na 14.2 ma obu ghari itinye ya ozo?
"Ọzọkwa, ebe ọ bụ na ha adịghị ewu ewu, enwere obere malware maka ha."
Emegharịla ihe, ịchọta ihe iyi egwu na sistemụ arụmọrụ anaghị eme ka ọ nwekwuo nchebe, ịbụ sọftụwia na-emeghe na isi iyi os, ọ bụrụ na ndị ọrụ merie, ha nwere ike melite nchekwa ha ebe ọ bụ na a ga-akọ ọtụtụ egwu na ọtụtụ ihe ma n'ezie Os Unix dị ka nke Microsoft karịrị nke Microsoft n'ụzọ ọ bụla (ọkachasị FreeBSD)
Emeelarị ụdị ọhụrụ nke Fedora 30